Maxkamadda Pretiroa oo go'aan ka gaareyso eedeymo ka dhan ah Zuma - BBC News Somali
Maxkamadda Pretiroa oo go'aan ka gaareyso eedeymo ka dhan ah Zuma
29 Abriil 2016
Image caption Zuma waxaa horey loogu haystay dayactir uu ku sameeyay gurigiisa ku yaala Nkandla oo la sheegay in kharash aad u badan uu ku baxay.
Maxkamadda sare dalka Koonfur Afrika ee magaalada Pretoria, waxaa haatan ka socota dhageysiga dacwad la filayo in garyaqaanadu ay go’aan ka soo saaraan in dib loo soo cusboonaysiinayo iyo in kale ku dhawaad 800 eedeymo musuqmaasuq la xiriira oo ka dhan ah adaxweynaha, Jacob Zuma.
Sanadkii 2009-kii ayaa sii hayaha xafiiska dacwad oogaha guud ee dalkaasi waxa uu la laabtay eedeymahaasi, tallaabadaasi oo u suurtagelisay Jacob Zuma in loo soo doorto xilka madaxweynenimada dabayaaqadii isla sanadkaasi.
Dacwad ooguhu waxa uu go’aankaasi qiil uga dhigay in dacwaddaasi lagu hayay faragelin siyaasadeed oo la xiriirta heshiis dhanka hubka ah oo ay ku baxday balaayiin doolar.
Tan iyo xilligaasina xisbiga mucaaradka ah ee ugu weyn dalkaasi ee isbahaysiga dimuquraadiga ee (DA) ayaa ku doodayay in go’aankaasi dacwad oogaha guud laftinkiisa uu ahaa mid siyaasadeysan.
Bishii la soo dhaafay ayaa maxkamadda ugu sareysa dalkaasi Koonfur Afrika waxa ay sheegtay in madaxweyne Zuma uu ku tuntay dastuurka dalka u yaala kaddib markii uu soo baxay muranka ku saabsan dayactir uu ku sameeyay gurigiisa gaarka ah eek u yaala tuulada Nkandla.